Ndinogadzira sei urongwa muvharobe yevana vangu?
Mazano ezvokuchengetedza zvakagadzirirwa
Ivai nevana pavanosuka
Kuchengetedza urongwa muhupfeko hwevana ndeyekuoma. Nguo idzi shoma, asi kune zvakawanda zvayo. Nokuti vana vanokura nekutsvaka zvinhu zvitsva. Mukuwedzera, vana vachiri kuda kudzidza kuti nei kugara uchichenesa kunokosha uye kunonzwisisika. Asi nekutaura kwakarurama uye kubatsirwa kwevaduku, unogona kuchengeta kuchengeta kambani yakanaka.
Usati watanga kuumba urongwa, unofanira kutanga utora kabhodhi zvakanaka.
Geza vhejiro muchera
Chinhu chipi zvacho chisingazodiwi kana kuti hachichiri kuda chinoraswa. Kune nzira dzakasiyana-siyana umo hurumende inogona kunyatsogadziriswa nekucheneswa.
Semuenzaniso, pamwe nekambani yeC3, iwe unogadzira zvose nguo mumidziyo yakanyorwa kuti "Chengetai," "Inobatsira," uye "Rambai." Iwe unogona kusarudza kana iwe uchida kutengesa, kupa, kurasira kure kana kupa zvipfeko zvakagadzirwa mumusana wekugadzira mbatya.
Kunyange zvazvo izvi zvinogadzira dambudziko rakawanda pakutanga, rinoita kuti zvikwanise kugadzirisa zvakakwana zviri mukati mewadhirobe. Unogonawo kushandisa nguva yekudzima kabhopu isina chinhu.
Nzira inobudirira yekudzivisa mhirizhonga haisi kurega ichi zviitike. Zvechokwadi izvi zvakaoma nevana. Ndokusaka zviri mukati mekatebhodi zvinofanira kuitirwa kuti zvive zvekubatsira kwevana uye zvinobatsira, kuitira kuti zvinhu zvose zvive nenzvimbo yaro nguva dzose:
Rongedza zvipfeko nemabhuruku akasiyana-siyana uye mashegi mune imwe pfuti, T-shati mune imwe.
Somuenzaniso, shandisa mabhokisi akasiyana kuti uchengetedze shangu, mapajamas, zvitsvuku kana kushambidza. Kuita kuti zvive nyore kwauri uye nevana, unogona kuzvitumidza.
Zvinhu zvezhizha zvisingadiwi muzhizha uye zvakasiyana-siyana zvinogona kuchengetwa mumabhokisi akavharidzirwa kana mubhobhoti. Saka ivo vanochengetedzwawo pamusana pekufema.
Kana zvipfeko zvave zvakapfeka asi zvisingadi kugezwa, unogona kugadzira nzvimbo yakasiyana. Semuenzaniso, mune chimiro chechigaro, chitima chembatya kana zvikorekiti zvakasiyana pamativi ehutoni kana rusvingo. Nguo dzinogona kubva dzakapfekedzwa zvakare zuva rakatevera kana kudzorerwa zvakare mukapu.
Uyewo yakakurudzirwa ndeyekuchenesa mabhasiki muchera. Zvitsvina zvakasviba hazvizove zvakashata zvakapoteredza.
Kunyanya vana vaduku vanofanira kudzidza kuti kuchengeta chirongwa chinoshanda sei. Somubereki, unogona kutsigira vana vako. Vabereki vanogara vari muenzaniso, kunyange pavanenge vachisimudza. Saka zvakakosha kuti vana vararame humwe hutano hwekutanga. Migumisiro uye mashoko akajeka achiri kukosha zvikuru kunyange muzera rechikoro, kuitira kuti vana vazive chavanoita.
Kuti mbeu dzirambe dzichichengetedza urongwa mumakamuri avo munguva yakareba, dzinofanira kunge dzikwanisa kusvika pane zviri mukati. Zvipfeko zvinodiwa zuva rega rega, saka hazvifaniri kunge zviri mumatayiti makuru. Izvo zvirembera muhukuru hwomwana, vana vaduku vanokwanisa kubata zviri nani. Zviri nyore kuti vashandire nguo uye jake. Kunewo maitiro ehutori ayo akanyatsogadzirirwa vana nehukuru hwavo.
Pane imwe nguva urongwa huripo, zviri nyore kuti vana varambe varipo. Nokuti vanogona kutungamira pachavo pane zvakagadziriswa muhutori. Kuchengeta zvinhu zvakarongeka inzira inopfuurira. Vana vanokura uye vanokura nokukurumidza, saka nguo itsva dzinodiwa munguva pfupi.
Nokudaro zvinokurudzirwa kuisa mitemo yekugadzirisa, somuenzaniso nezuva rakasimbiswa apo kabhodhi yakanatswa. Kunze kweizvozvo, kufanana ne 5-S nzira inoratidza kuparidzira mapikicha emamiriro ezvinhu akanaka mushure mekuvhara kunze, kusarudza uye kuchenesa kamera. Vana vanogona kutarisa pane izvi, kana vachizvichenesa.
Basa rekurukurukuru Dzidzo yemhuri
Sei ndichifanira kuva nevana? dzidzo
Movement for children | Dzidzo yemitambo
Endai vana, nzvimbo ichene! | dzidzo
Apo vana vanoputsa zvinhu ... dzidzo
Vana vane zvipo zvevana | dzidzo